‘बिजुली प्रयोग गर्न दिएकोमा कोटि कोटि धन्यवाद दिन्छु तर बिल तिर्न सकिन्न’– नगर प्रमुख शाही – E Kutumba
‘बिजुली प्रयोग गर्न दिएकोमा कोटि कोटि धन्यवाद दिन्छु तर बिल तिर्न सकिन्न’– नगर प्रमुख शाही
By ईकुटुम्ब	 On Jun 12, 2020 0
पाल्पा, जेठ ३०
तानसेन नगरपालिकाले नेपाल बिद्युत प्राधिकरण पाल्पा बितरण केन्द्रलाइ ०६६ देखि ०७७ जेठ २९ सम्मको ५ करोड १३ लाख ६३ हजार ८ सय ४३ रुपैँया तिर्नुपर्ने छ । नियम अनुसार यसको २५ प्रतिशत अर्थात १ करोड २८ लाख ४० हजार ९ सय ६१ रुपैँया नगरपालिकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो सडक बत्ति बापतको शुल्क हो । नगरपालिकाले १ रुपैँया पनि पैसा नतिर्ने बरु नगरपालिकामा पोल गाडेको, सामान राखेको बापत बिद्युत प्राधिकरण संग रकम अशुल्न पर्ने हुन सक्ने नगर प्रमुख शाहिले बताए । ‘हामिले पैसा किन तिर्ने ? हाम्रो बजार किन प्रयोग गरेको ? उनिहरुले रकम अशुल्ने हो भने हामिलाइ नगर प्रयोग गरेको पैसा चाहिन्छ’ शाहिले भने, ‘बजारमा हामि मात्रै हिँड्दैनौँ, वाहाँहरु पनि हिँड्नुहुन्छ , सुरक्षा सबैलाइ चाहिने होला, वाहाँहरुको पनि त सामाजिक उत्तरदायित्व होला नि ।’ शाहिले चुहावट भएको बिजुली हिसाव गरेर नगरपालिकाको वक्यौतामा देखाउने गरेको समेत आरोप लगाए । ‘के को हिसावले रकम दावि गरिएको हो ?’ उनले भने, ‘तिर्ने भन्ने त मसंग कुरानै नगरे हुन्छ ।’ तर नगरपालिका र बितरण केन्द्र बिच नगरपालिकाले मासिक ६५ हजार युनिट प्रयोग गर्ने र त्यसको शुल्क तिर्ने निर्णय भएको बितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यलयको पत्र अनुसार बक्यौता रकममा समर्थन पत्र लेख्न अनुरोध गर्दा समेत बेवास्था गरेको छ । ०७४ असार मसान्त सम्मको बक्यौता रकम मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्राधिकरणलाइ तिर्ने सहमती भएको थियो । तर नगर पालिकाले तिर्नुपर्ने रकम प्रमाणित सम्म पनि गरेन । ७४ पछि स्थानिय तहले नै महशुल बुझाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । घुमाइ फिराइ नगरपालिकामा आउने बजेटबाट रकम काटिने गलत बुझाइले समर्थन पत्र नदिएको पाल्पा बितरण केन्द्र प्रमुख शुसिल पौड्यालले बताए ।
नगरपालिका संग ताकेता गर्न नसक्नु र नगरपालिकाको ढिपीका कारण बक्यौता थपिदै गएको छ । बितरण केन्द्र र नगरपालिका संग कतिपय बेला मिलेर काम गर्नु पर्ने र नियम अनुसार अशुल्न खोज्दा जटिलता उत्पन्न हुने भएकोले कुनै एक्सन लिन नसकेको पौड्यालले बताए ।
पुर्व उद्योग राज्यमन्त्री निषादको निधन
बगनासकालीले क्वारेनटिनमा रहेका १ सय १५ जनाको स्वाब परिक्षणका लागि पठायो